Ahoana ny fanovana ny loko amin'ny Adobe Photoshop haingana sy mora | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, Photoshop, Cheats, Tutorials
Photoshop dia fitaovana tsara hanovana ny zava-misy amin'ny sarinao. Ny programa dia manolotra fitaovana lehibe hanovana ny lokon'ireo singa rehetra mandrafitra sary. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianatra anao aho ny fomba fanovana loko amin'ny Adobe Photoshop haingana sy mora. Ity fika ity dia loharanom-pahalalana tsara ary, na dia tsotra aza dia manome matetika Valiny tena tsara.
1 Manova loko ao amin'ny Photoshop amin'ny fampiasana sarintany gradient
1.1 Sokafy ny sarinao ary manaova ny fisafidianana
1.1.1 Zava-dehibe ny fifidianana
1.2 Mamorona sarintany map grady
1.3 Ovao ny fananana gradient
1.4 Ovao ny loko
1.5 Milalaova amin'ny mainty sy fotsy
Manova loko ao amin'ny Photoshop amin'ny fampiasana sarintany gradient
Sokafy ny sarinao ary manaova ny fisafidianana
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ao amin'ny Photoshop ny sary te-hanitsy izahay. Raha ny amiko, ny tsy tiako amin'ity sary ity dia ny lokon'ny akanjo ba an-drazazavavy, ka dia hofidiko izy ireo hanova azy. Izany no nampiasako ilay fitaovana Safidy haingana y Nodioviko tamin'ny alàlan'ny fampiharana ilay sarontava ary miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana borosy.
ianao azonao atao ny mampiasa ny fitaovana fifantina izay hainao tsara indrindra, Tsy maninona izany. Andramo ary ampiasao ilay mora indrindra aminao sy ilay manome valiny tsara indrindra rehefa mifantina ny singa manokana tianao iasaina.
Zava-dehibe ny fifidianana
Ny zava-dehibe indrindra hahazoana vokatra tsara rehefa manova ny loko amin'ny Photoshop dia misafidy tsara. Noho io antony io dia mamporisika anao aho hanokana fotoana amin'ity dingana ity ary hampiasanao ilay sarontava mifantina mba hadio araka izay azo atao. Avelako eto ianao lahatsoratra iray avy amin'ny Creativos Online izay misy fanazavana amin'ny antsipiriany kokoa momba ny fampiasana ny maska ​​fifantina.
Mamorona sarintany map grady
Raha vantany vao vita ny safidy, ny dingana manaraka dia mamorona sosona map gradient. Ao amin'ny kiheba sosona, eo ambany, no hahitanao a famantarana boribory izay mamela anao hamorona sosona feno sy mety. Tsindrio dia haseho ny menio, tadiavo ny Safidy sarintany gradien.
Ho hitanao fa eo amin'ny sosona ambadika (amin'ny sarinao) no namoronana anao sosona vaovao mifanaraka amin'ny sarintany gradient.
Ovao ny fananana gradient
Ao amin'ny sosona map gradient, ataovy kitiho indroa sosona indroa hampiseho ny menio ny fananana gradient. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bara, dia hanokatra varavarankely ahafahanao misokatra amboary ny karazana gradient. Hisafidy ny iray amin'ireo fotokevitra fototra Photoshop ianao, ilay mandeha manomboka amin'ny mainty ka hatramin'ny fotsy.
Ovao ny loko
Araka ny hitanao, ny lokon'ny akanjo ba dia efa niova ho karazana volondavenona. Izay hataontsika izao dia ampidiro ny loko tadiavinay omeo ilay singa nanapa-kevitra ny hanova. Ao amin'ny varavarankely «gradient editor» izay nosokafanao teo aloha dia hahita mahitsizoro ianao, kitiho eto ambany raha mamorona slider "haavon'ny loko" vaovao.
Fanindriana an'io mpikorisa io, Mifidiana ny santionanao ny loko irina. Azonao atao ihany koa ny manindry indroa amin'ny slider ary avy eo amin'ny varavarankely «selector color» dia ampidiro ny kaody, araka izay tianao.
Milalaova amin'ny mainty sy fotsy
farany, hilalao amin'ny gradient izahay ka ny fanovana ny loko dia tsara araka izay azo atao. Ny faritra ankavanan'ny mahitsizoro gradient, ilay misy ny fotsy, dia mifanitsy amin'ny hazavana sy ankavia, ilay misy ny mainty, amin'ny aloka. Mamindra ny mpifidy manomboka amin'ny lafiny iray mankany amin'ny iray hafa dia tsy izany ihany Hodinihinay ny lokon'ny loko ampiharina (mahatonga azy ho maivana na maizina kokoa), koa afaka manaja ny jiro sy ny aloka isika ny singa amboarinay ka rehefa manolo ny lokony dia tsy dia artifisialy kely araka izay azo atao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fanovana ny loko amin'ny Adobe Photoshop haingana sy mora